के पुटिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कारबाही गर्न सकिन्छ ?
२०७८ चैत ५ शनिबार
काठमाडौँ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले गर्भवती महिला र बालबालिकाको अस्पतालमा आक्रमण गरेकोमा रुसले 'युद्ध अपराध' गरेको आरोप लगाएका छन् ।
जेलेन्स्कीले यसअघि रुसमाथि युद्ध अपराधको आरोप लगाएका थिए । तर के यो युद्ध अपराध हो र यसको लागि रुस विरुद्ध कुनै कारबाही गर्न सकिन्छ त ?
रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले 'युद्ध अपराधका पनि आफ्नै नियमहरू हुन्छन्' भन्ने परिभाषित गरेको छ ।
युद्ध अपराधलाई परिभाषित गर्ने यी नियमहरूलाई जेनेभा महासन्धि भनिन्छ ।
युद्ध अपराध के हो ?
यसअन्तर्गत नागरिक र उनीहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई जानाजानी लक्षित गर्न सकिँदैन । ठूलो मात्रामा विनाशलाई ध्यानमा राख्दै, धेरै हतियारहरूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जस्तै एन्टी पर्सनल ल्यान्डमाइन र रासायनिक वा जैविक हतियारहरू ।
बिरामी र घाइतेको उपचार गर्नुपर्छ । यसमा युद्ध कैदीको रूपमा अधिकार भएका घाइते सैनिकहरू पनि समावेश छन् । अन्य कानूनहरूले युद्धमा यातना र नरसंहार निषेध गर्दछ । युद्धका क्रममा हत्या, बलात्कार वा नरसंहारलाई मानवताविरुद्धको अपराध भनिन्छ ।
तर, युक्रेनमा रूसलाई कस्तो प्रकारको युद्ध अपराधको आरोप लगाइएको छ ? युक्रेनका अनुसार मारिउपोलमा गर्भवती महिला र बालबालिकाको अस्पतालमा रुसले गरेको आक्रमण युद्ध अपराध हो । यहाँ एक बालकसहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने १७ कर्मचारी र बिरामी घाइते भएका छन् ।
रुसी सेनाले युक्रेनबाट गइरहेका सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गरेको आरोप पनि छ । रुसले खार्किभको आवासीय क्षेत्रमा क्लस्टर बम प्रयोग गरी व्यापक क्षति पुर्याएको प्रमाण पनि छ ।
यद्यपि रूस र युक्रेन दुवैले यी हतियारको प्रयोगमा प्रतिबन्धमा हस्ताक्षर गरका छैनन् तरपनि त्यस्ता आक्रमणहरूलाई युद्ध अपराध मान्न सकिन्छ ।
बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले रुसले वायुमण्डलबाट अक्सिजन चुसाएर ठूलो विनाश निम्त्याउने थर्मोबारिक बम प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । त्यस्ता हतियारहरू प्रतिबन्धित छैनन्, तर नागरिकहरू नजिक तिनीहरूको प्रयोग युद्धको नियमहरूको उल्लङ्घन मानिनेछ । तर, धेरै विज्ञहरूले देशमाथि आक्रमणलाई आक्रामक युद्धको श्रेणीमा राख्छन् ।
युद्ध अपराधीहरूलाई कसरी कारबाही गरिन्छ ?
संदिग्ध युद्ध अपराधीहरूको छानबिन गर्नु हरेक देशको कर्तव्य मानिन्छ । कतिपय देशहरू यस विषयमा बढी गम्भीर देखिन्छन् । वरिष्ठ ब्रिटिश पुलिस अधिकारीहरूले युक्रेनमा युद्ध अपराधको प्रमाण फेला पार्न मद्दत गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
यी अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीजे) र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ । रुवाण्डा नरसंहारका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न एक न्यायाधिकरण बनाइएको थियो । यस मामला मा, १९९४ मा हुतु चरमपन्थीहरूले १०० दिनमा आठ लाख मानिस मारेका थिए ।
आईसीजेले दुई देशबीचको विवाद सुन्न सक्छ तर व्यक्तिगत स्तरमा सजाय तोक्न भने सक्दैन । युक्रेनले रुसको आक्रमणविरुद्ध आईसीजेमा मुद्दा दायर गरेको छ । आईसीजेले रुसको विरुद्धमा फैसला गरेको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा छ । रसियासँग सुरक्षा परिषदमा भिटो शक्ति छ, यसले कुनै पनि प्रस्ताव वा प्रतिबन्धलाई रोक्न सक्छ ।
एकै समयमा, व्यक्तिगत युद्ध अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा अनुसन्धान र सुनुवाइ गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम ऐन १९९८ अन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सको द हेगमा १९९८ मा स्थापना भएको थियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हानि पुर्‍याउने सबैभन्दा गम्भीर अपराधको अभियोगमा मुद्दा चलाउने र सुनुवाइ गर्ने स्वतन्त्र निकाय हो ।
यसले युद्ध अपराध, नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र आक्रामक अपराधको अनुसन्धान गर्छ ।
कुनै पनि देशले आफ्नो अदालतमा संदिग्ध अभियुक्तहरूलाई मुद्दा चलाउन सक्छ । आइसीजेले क्षेत्राधिकार मात्र प्रयोग गर्न सक्छ जहाँ कुनै देश तयार छैन वा गर्न सक्दैन । यो 'न्यायको लागि अन्तिम उपायको व्यवस्था' हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा १२३ सदस्य राष्ट्र छन् जसमा रुस र युक्रेन सदस्य छैनन् । तर युक्रेनले अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई स्वीकार गरेको छ, अर्थात् अब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) ले युक्रेनमा केही कथित अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न सक्छ ।
के आईसीसीले युक्रेनमा अपराधलाई कारबाही गर्न सक्छ ?
आइसीसीका प्रमुख अभियोजक बेलायती वकिल करीम खानले युक्रेनमा युद्ध अपराध भएको र यसबारे अनुसन्धान गर्न ३९ देशबाट अनुमति पाएको तर्कसंगत आधार रहेको बताएका छन् । अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिले र हाल लगाइएका आरोपहरू हेर्नेछन् । यसमा, रुसको क्राइमियालाई विलय हुनुभन्दा अघिको २०१३ सम्मको आरोपहरू देखाइनेछ ।
यदि व्यक्तिहरू विरुद्ध प्रमाण फेला पर्यो भने, अभियोजकले आईसीसीलाई उनीहरूको लागि पक्राउ वारेन्ट जारी गर्न अनुरोध गर्नेछ ।
तर, यस अदालतको पनि सीमा छ । यस अदालतको आफ्नै प्रहरी बल छैन र अभियुक्त पक्राउ गर्न सम्बन्धित देशको सहयोगमा निर्भर छ ।
रुस आईसीसीको सदस्य होइन । यो २०१६ मा बाहिर आयो । राष्ट्रपति पुटिनले कुनै पनि संदिग्धलाई सुपुर्दगी गर्दैनन् ।
पुटिनलाई कारबाही गर्न सकिन्छ ?
सिपाहीलाई हतियार प्रयोग गर्न दिने नेतालाई भन्दा युद्ध अपराधको लागि सिपाहीलाई दोष दिन सजिलो हुन्छ । आईसीसीको सदस्य नभएकाले आईसीसीले रुसी नेताहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्दैन । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले आईसीसीलाई अपराधको छानबिन गर्न अनुरोध गर्न सक्छ । तर, रूसले यसलाई भिटो गर्न सक्छ ।
आईसीसी कत्तिको प्रभावकारी छ र कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले काम गर्छ त्यो सन्धिमा मात्र होइन राजनीति र कूटनीतिमा पनि भर पर्छ ।
‘पुटिन उपस्थित भएका कारण जी–२० शिखर सम्मेलन बहिष्कार नगर्नुस्’- प्रधानमन्त्री जोनसन
म्याड्रिड । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बुधबार भ्लादिमिर पुटिन उपस्थित भएमा नोभेम्बरमा इन्डोनेसियामा हुने जी–२० शिखर सम्मेलन बहिष्कार नगर्न सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । यसले ‘अरुलाई प्रचारको अवसर’ दिने
मस्को । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँगको द्वन्द्वको शुरुवात्पछि मध्य एसियाली देशहरू - ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । युक्रेन द्वन्द्वपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण
जी-७ शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति पुटिनको मजाक उडाइयो !
काठमाडौँ । जी-७ देशहरूको शिखर सम्मेलन जर्मनीमा हुँदैछ । सम्मेलनको पहिलो दिन, जुन २६ मा, ब्लकका सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले युक्रेनमा रुसको आक्रमण, त्यसको बहुआयामिक प्रभाव र युक्रेनको अवस्थाबारे छलफल गरेका
युक्रेनको नयाँ ठाउमा आक्रमण गर्ने पुटिनको चेतावनी
काठमाडौँ । रुसको युक्रेनमा आक्रमण सयदिन भन्दा बढी भएको छ । यसैक्रममा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमी देशहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले युक्रेनलाई लामो दुरीका क्षेप्यास्त्रहरू उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि पुटिनको